Ururka faanoole Human Rights oo sheegay in Jubaland ay ka dhaceen falal lid ku ah Xaquuqul insaanka | HOYGA WARARKA CAALAMKA
Ururka Faanoole Human Rights oo ah Urur ka shaqeeya Arrimaha Xuquuqul insaanka ayaa markii ugu horeesay Shaaca ka qaaday,islamarkaana soo bandhigay arimo la xiriiro tacdiyo ka dhacay meelo ka mid ah Soomaaliya.
Ururka ayaa shaaciyay in meelaha ugu badan ee tacadiga uu ka dhacay ay ka mid tahay deegaanada maamul gobaleedka jubaland.
Karar Aadan Rukow oo ka mid ah saraakiisha Ha’ayada Faanoole Human Rights oo la hadlay Warbaahinta ayaa shaaca qaaday in ay dhaceen tacdiyo aad u badan oo ay ka mid yihiin dad baabuur lagu jiiday ,dad lagu jirdilay xabsiyada dhexdooda ,dil wadreedyo iyo tacadiyo kale oo aad u badan.
goobaha sida gaar ah ay wax oga dhaceen ayuu ururka uu ku tilmaamay dagmooyinka baladxaawo iyo dolow gobalka gedo ee maamulka jubaland.
Dadka dhibanayaasha ah ee waxyeelada soo gaartay ayaa lagu tilmaamay in ay ka kooban yihiin nabadoona caan ka ah jubooyinka,Dhalinyaro iyo Haween kuwasoo la sheegay dhamaantood in ay la kulmeen tacadiyo ka dhan ah xaquuqul insaanka .
Ururka faanoole waxaa uu walaac ka muujiyay soo qabashada shaqsiyaad lagu tuhmayo in ay ka danbeeyen dhibaatooyinka loo geystay dadkaasi rayidka ee aan waxba galabsan.
Muuqaalka sawirada ah ee aad aragtaan waa dhibane maxamed aadan oo lagu jiiday baabuur sanadii laba kun iyo shan iyo toban.
Hoos ka daawo sawirada dhibane maxamed
Tirada guud ee dhibanayaasha lagu xadgudbay ayaa lagu sheegay in ay gaarayso ilaa sideetameeyo ruux ,kuwasoo isugu jira dad la xukumay iyagoon wax Maxakamd ah la soo saarin, kuwa loo geystay dil bareer ah iyo kuwa laga Masaafuriyay guryahooda.
Soo bandhigida faanoole Human Rights Watch ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan warbixin sanadeedka UN,ka lagu soo bandhigay qoraalo iyo cadaymo muujinaya in dhibaatooyin ay ka dhaceen deegaano ka tirsan Maamulka Jubaland.
waxaana kooxda daba galka UN,KA au shaaciyeen in tira xadgudubyo ah ay ka dhaceen Jubbaland.
HOOS KA AQRISO QORAALKA UN-ka